देशदृष्टि – Blog by Milan Bagale
सम्यक सम्वाद भाग ९ —मन चिसोमा रमायो, शरीरले सहेन
कहिले निन्द्रा नलागेको खबर, कहिले लुटुक्क निन्द्रा लागेको खबर । कहिले भोक लागेको खबर, कहिले भोक नलागेको खबर । कहिले चिसो मन परेको खबर, कहिले तातो मन परेको खबर । साना मान्छेका खबरहरु सानसानै हुन्छन् । तर कहिलेकाही साना खबरले ठूलै समस्या ल्याउँछन् । अनि अस्पतालतिर दौडिन पर्छ । औषधी र सुइँ मन पर्दैन मलाई त । आमाले औषधी खुवाउन लाग्नुभो भने म गन्धले नै थाहा पाउँछु । अनि मुख ट्याप्प पारेर बसिदिन्छु ।
मेरो पातलिएको निन्द्रा बाक्लिएसंगै बाआमाले चैनको श्वास फेर्नुभएको छ । मलाई चिसो मन पर्दो रहेछ । तीन दिन यता लगातार झरी पर्न थालेदेखि म मस्त निदाएँ । पानी नपरेर घाम लाग्दा त मलाई छटपटी हुन्थ्यो । तातोले गुम्सिएर निदाउँनै सक्दैनथें । बालखालाई चिसो लाग्छ भनेर पंखा नलगाईदिने । बेलाबेलामा खुल्ला हावामा घुमाउन लैजाँदा असाध्यै रमाइलो लाग्थ्यो । घुमाउन लैजाादापनि लुगा, टोपी, पन्जा, मोजा सबैथोक लगाइदिएर लैजाने । मलाई त दिक्क लाग्थ्यो । गर्मी भो भनेर कराएपछि बल्ल फुकालिदिनुहुन्थ्यो । पातला लुगा लगाईदिएर शीतल हावामा राख्दििंदा मलाई साह्रै रमाइलो लाग्थ्यो । तर त्यस्तो मौका धेरै पाएको छैन । कि बाक्ला लुगा लगाईदिन्छन् कि त बाक्लो बर्कोले बेरिदिन्छन् ।
जसै झमझम झरि पर्न थाल्यो, म मस्त निदाउन थालें । यहीनेर अलिकति तालमेल बिग्रियो । गर्मीले म छट्पटाएको देखेपछि मलाई पातलो लुगा लगाईदिन थालेका थिए । ओढ्ने लुगापनि पातलै हुन्थ्यो । बाक्ला लुगा फालेर अलि पातलापातला लुगा लगाईदिएपछि मेरो चटपटी अलि शान्त हुन्थ्यो । बालखा पातलापातला लुगामै रमायो भनेर झरी परेपनि मलाई त्यतिधेरै बाक्ला लुगा लगाईदिएनन् । सेकतापको बेलामा बाहेक अरुबेला हिटरपनि बालेनन् । मेरो मन त चिसोमा रमायो तर शरीरले सहेन ।
म निदाउन त मस्त निदाएँ तर चिसो लागेपछि बेस्सरी बान्ता गरें । छातीमा कफ जमेजस्तो भयो । मैले हुलुलु बान्ता गरेपछि आमाले कुरो बुझिहाल्नुभो, बालखालाई चिसो लाग्यो । खासमा आमा त बालखा अलिअलि चटपटाएपनि न्यानै लुगा लगाइदिनपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तर बाले चाहि “बालखालाई गर्मीले साह्रै दुख दिंदो रैछ, पटक्कै निदाउन सकेन लुगा अलिकति पातलो पारौं” भन्नुभो । मैले सञ्चो त मानें तर जीउले सहेन ।
मलाई वान्ता भएपछि आमाले दिनभर हिटर बालेर बाक्ला लुगा लगाईदिएर न्यानो पारेर काखमा राख्नुभयो । हिटर तापेपछि र बाक्ला लुगा लगाएपछि बान्ता थामियो । बुबु खाएपछि अलिअलि हुलुक्क त म सधैं गरिहाल्छु तर त्यस्तरी हुलुलुु बान्ता त कहिल्यै भएको थिएन । मेरो लागि छुट्टै सिरकपनि बनेको रहेछ तर अलि बढी नै बाक्लो रहेछ । त्यसले त मलाई किचेजस्तो पो भयो । त्यो सिरक अलिपछि ओढ्छु है । अहिलेलाई हेर्दा पातलो तर न्यानो बर्कोले सपक्क बेरिदिनुस् है ।
हामी बालखाहरुलाई बुझ्न र पढ्न सजिलो छैन । केले ठिक हुन्छ, केले बेठिक हुन्छ, हामीहरुलाई नै थाहा हुँदैन । दिनदिनै र छिनछिनै सजिलो र अप्ठेरोको कुरो फेरिइरहन्छ । त्यसैले सधैं चनाखो भएर हाम्रो ख्याल गरिरहनुस् है । राम्ररी ख्याल गर्नुभएन भने धेरै दुख हुन्छ के । आजलाई मेरो कुरा सकियो है ।
(२०७९ साल असार १६ गते बिहिबार)
Posted bymilanbagale June 30, 2022 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सम्यक सम्वाद भाग ९ —मन चिसोमा रमायो, शरीरले सहेन
सम्यक सम्वाद भाग ८ — रातभर डुल्ने छोरो र घरमै सिलाएको भोटो
लीलामय मेरो दुनियाँ बडो अचम्मको छ । कतिखेर कुन लीला जुर्छ, मलाई नै थाहा हुँदैन । लीलामय बालापनमा रमाउनुको मजा बेग्लै छ । तर बालखाको सबै लीला अभिभावाकलाई मनपर्छ भन्ने छैन । हाम्रा कतिपय लीलाले उहाँहरुलाई राम्रै दुख दिँदो रहेछ । आजकाल मेरो नयाँ लीला थपिएको छ । जतिखेर पनि बोकेर डुलाईरहे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने । बोकेर डुलाए मात्र निन्द्रा पर्ने । नत्र निन्द्रै नपर्ने । मेरो यो लीला थपिएको २ दिनमात्र भयो । यो लीला थपिएसंगै बाआमाको थप बेहाल भएको छ ।
केही दिन अघिसम्म म झोलुंगो यस्सो हल्लाउनासाथ निदाउँथें । मेरो निन्द्राको ताल त उही हो । एकदम छोटो र पातलो । तरपनि काम चलेकै थियो । पछिपछि झोलुंगोको हल्लाई मन पर्न छोड्यो । झोलुंगोसंग डर लाग्न थाल्यो । रिंगटा लागेजस्तो भो । झोलुंगोमा नहल्लाउ भनेर चिच्याएपछि म काखे बनें । काखमा लिएपछि सन्चो र सुरक्षित महसुस हुने । न्यानो हुने । अनि लुपुक्क निदाउने । दिन बित्दै जाँदा थपक्क काखे भएर बस्नपनि मन लागेन । थपक्क ओछ्यानमा बसेर निन्द्रा पर्खन पनि मन लागेन । काखे त हुने तर डुलाएमात्र निदाउने । डुलाएमात्र रमाउने ।
मलाई कतिबेर डुलाउने ? कतिबेर भुलाउने ? दिउँसो डुलाउने कि रातभर डुलाउने ? मसंग ठ्याक्कै जवाफ छैन । मलाई त जतिखेर पनि डुलाईरहे हुन्थ्यो जस्तोमात्र लाग्छ । खाने बेलामा चाहिँ डुलाउन परेन । अरु बेलामा मलाई डुलाईरहन पर्यो । मलाई ठग्न सजिलो छैन । छिसिक्क बिसायो कि थाहा पाईहाल्छु । एकैछिन डुलाएपछि बालखा त निदायो भनेर हत्तपत्त ओछ्याउनमा वा झोलुंगोमा सुताउन लैजान्छन् । जति अलक्क लगेपनि के ? मैले थाहा पाईहाल्छु । हल्लाखल्ला गरिहाल्छु । अनि फेरि नडुलाएर सुख ? निन्द्रा लाग्यो, थकाई लाग्यो, अल्छी लाग्यो, भोक लाग्यो भनेर झर्को मानेर पाईयो ? त्यसो घर म त घरै उचाल्ने गरि कराईदिन्छु । चिरिएर चिच्याईदिन्छु ।
मलाई डुलाउने, भुलाउने, झुलाउने प्रक्रिया रातभर चलिरहन्छ । झुल्दै कोठामा फन्फनी घुमिरहेका बाआमा देख्दा मलाई रमाइलो लाग्छ । मेरा अनेक अवतार उहाँहरुले देख्न बाकी नै छ । अहिले त कोठाभित्र डुलाएकै भरमा पुगेको छ । अलिपछि घरको तलमाथी मात्र होइन, घरबाहिर पनि डुलाउन लानपर्छ भन्छु होला । रातदिन हिडेको हिड्यै गरिरहनु, फिटिक्क नरोकिनु भन्छु होला । त्यतिबेला चाहि के भन्ने होलान् मलाई ?
मेरो कुरो सुनेर तपाईंहरुको सातो भयो होला है ? नआत्तिनुस् । मेरा रहस्यमय लीलाहरुभित्र अप्ठेरा कथाहरु मात्र छैनन् । रमाइला कथाहरु पनि छन् । सजिला कथाहरु पनि छन् । रहस्यका ती पर्दा बिस्तारै खुल्दै जान्छन् । सबैले देखे, जानेकै भोगेकै कुराहरु हुन् । म बालाई भन्दै जान्छु । बाले अल्छी नमानी टिप्दै जानुहुनेछ ।
जाँदाजाँदै मेरो नयाँ भोटोको कहानी सुनाउछु । मसंग ढाकाको थुप्रै भोटोहरु छन् । ढाकाको भोटो हेर्दामात्र नरम हुनेरैछ । भित्र त नाइनलको कपडा हालेका हुँदा रैछन् । नाइनले ढाकाले त बिझायो । पोल्यो । मन परेन । मलाई ढाकाको भोटो मन नपरेको आमाले थाहा पाउनुभो । अनि हजुरबाको जिम्मामा मलाई छोडेर बाआमा भोटोको कपडा किन्न बजार जानुभो । नरम कपडा र नरम भित्री किनेर ल्याउनुभो ।
शुरुमा त बजारमा लगेर सिलाउने सल्लाह भएको थियो । पछि के मुड चलेर हो, आमा आफैले कैची खोजेर कपडा काट्न थाल्नुभो । अनि सियोधाँगो खोजेर आफैले भोटो सिलाउनुभो । मेरी आमा कस्ती सिपालु । मेशिनविना नै हातले फटाफट सियोधाँगो खेलाएर भोटो सिलाएर लगाईदिनुभो । आमाले सिलाईदिनु भएको भोटो कस्तो नरम । कस्तो राम्रो । मलाई यस्तै भोटो लाईदिनु है । अरुपनि थुप्रै सिलाईदिनु है । ए बा, एउटा सानो हाते मेशिन किनेर ल्याइदिनु न । मेशिन भए आमाले के के कपडा सिलाइदिनुहुन्थ्यो होला ?
(२०७९ साल असार १३ गते सोमबार)
Posted bymilanbagale June 27, 2022 June 27, 2022 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सम्यक सम्वाद भाग ८ — रातभर डुल्ने छोरो र घरमै सिलाएको भोटो
सम्यक संवाद भाग ७ — छटपटे छोरो नभन्नु न मलाई !
मेरो कथा एकनासले बग्दैन । मेरोमात्र किन, कोही बच्चाको पनि कथा एकैनासको हुन्न । हामी कहिले कस्तो कहिले कस्तो । तपाईहरुको हेराईमा कहिले ज्ञानी, कहिले अज्ञानी । आज निन्द्रा लाग्छ, भोली लाग्दैन । आज भोक लाग्छ, भोली लाग्दैन । आज झोलुंगो मन पर्छ, भोली पर्दैन । आज हाँस्छु, भोली हाँस्दिन। आज खेल्दिन, भोली खेल्छु । आज बुबु मज्जाले खान मन लाग्छ, भोली लाग्दैन । हामी बच्चाहरुको कहानी यस्तै हुन्छ । ठ्याक्क ठ्याक्क ठ्याक्क मिलाएर खानुपर्ने, सुत्नुपर्ने, उठनुपर्ने, अड्कलेर मिलाएर बोल्नुपर्ने के बाध्यता छ र हामीलाई ? हामी त जे मन लाग्छ त्यही गर्ने हो । हाम्रो दुनियाँ लीला नै लीलाले भरिएको छ । हाम्रो जस्तो ताल छ, त्यसमै रमाउनुस् न है ।
आजकाल मलाई पटक्कै निन्द्रा लाग्दैन । खेल्नपनि मन लाग्दैन । सुत्दापनि नसुत्ने, खेल्दापनि नखेल्ने भएपछि बाले मलाई ‘छटपटे छोरो’ भन्या सुनेको छु । बच्चाबच्चीले छटपट त गरिहाल्छन् नी । खाँदाखाँदै निदाएजस्तो हुन्छ । यस्सो झकाउनासाथ बिउझिहाल्छु । झसंग भएर बिउँझदा एकछिन अलमल्ल पर्छु । अनि खान नदिएजस्तो भान पर्छ । त्यसपछि त चिरिएर कराउँछु । कराएपछि हुलुक्क हुन्छ । लुगा भिज्छ । आमाले फेरफार गराउनुहुन्छ ।
चिसो लागेको पुछिदिएपछि र कपडा फेराएपछि शरीरमा बल आउँछ । अनि बुबु चाहियो भनेर बेस्सरी कराउछु । छोरोले एकैपटकमा टन्न खाओस् र खुरुक्क सुतोस् भन्ने लाग्ने रैछ बाआमालाई । म त्यसो किन गर्छु ? मलाई थोरैथोरै र पटकपटक खाईरहन मन लाग्छ । थोरै खाएपछि धेरै निन्द्रापनि कसरी लागोस् ? एकैछिन सुत्ने , उत्तिखेरै उठ्ने, खान द्याओ भनेर कराइरहने, कराएपछि हुलुक्क गर्ने, रातभर हल्ला गरिरहने, फेरि सुत्ने, उठ्ने, खाने, खान द्याओ भनेर कराउने गरेपछि बाआमा हत्तु भएछन् । म त छटपटे छोरो रे !
सानो बालखा छटपटे हुन त परो क्यारे नी । बालखा सुतेन सुतेन भनेर मात्र भएन नी । सुताई मेरो रहरले मात्र हुन्न। निन्द्रा लाग्न परो । त्यसै निन्द्रा आउँदैन । कहिले गर्मी हुन्छ, कुरो नबुझेर लुगा झन् थपिदिन्छन् । कहिले जाडो हुन्छ, लुगा झन् घटाईदिन्छन् । कहिले डाइपरले डस्छ । कहिले केहीको गन्ध मन पर्दैन । कहिले गाडी र अर्थोकको आवाजले दिक्क बनाउँछ । कहिले बत्ती बालेको मन पर्छ , कहिले मन पर्दैन । कहिले झ्याल खोलेको मन पर्छ, कहिले बन्द गरेको मन पर्छ । यस्ता धेरै कुरा तालमेल मिलेमात्र मिठो निन्द्रा पर्ने हो । यस्ता सबै कुरा तपाईंहरुले बुझ्नुहुन्न । बुझेर साध्यपनि लाग्दैन । अनि आफ्नो कुरो बुझाउन नसकेपछि छटपट गर्नै पर्यो । चटपट गर्नै पर्यो । हल्लाखल्ला गर्नै पर्यो । सकेको चिच्याउनै पर्यो ।
हामी यस्तै हो । कहिले रुन्छम । कहिले शान्त हुन्छम । कहिले थोरै खाएपनि अघाउछौं, कहिले जति भएपनि पुग्दैन । कहिले बोकेको मन पर्छ । कहिले नछोएको मन पर्छ । हामी बिस्तारै सजिलो र रमाईलो हुँदै जान्छम । र्धैर्यपूर्वक हाम्रो तालमा हिड्नुहोला । नथाक्नुहोला । नआत्तिनुहोला । रातभर जाँगै बस्नुहोला । छटपटे छटपटे छोरो भनेर नभन्नु न मलाई ।
(२०७९ साल असार १० गते शुक्रबार)
Posted bymilanbagale June 24, 2022 June 26, 2022 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सम्यक संवाद भाग ७ — छटपटे छोरो नभन्नु न मलाई !
सम्यक सम्वाद भाग ६ — काखे बच्चा नभन्नु न मलाई !
मलाई बाआमाको काख मनपर्छ । काखमा राखेर डुलाएको मन पर्छ । काखमै निदाउन मन पर्छ । बाआमालाई म झोलुङ्गोमा वा ओछ्यानमा लुटुक्क निदाओस् भन्ने लाग्दो रैछ कि ? काखमै रमाइराख्ने बच्चालाई काखे भनिँदो रहेछ क्यार, बाबु त काखे भयो काखे भयो भनेर गुनासो गरेको सुन्छु । काखमा लिँदालिँदा हातै गलेर दिक्क मानेका होलान् । मायाले काखे भनेका हुन् भने त ठिक छ । बच्चा भएपछि काखे हुनै पर्यो । तर बोक्न झर्को मानेर काखे भनेका हुन् भने त मलाई यो कुरो मन परेन ।
काखमा बस्नु, खेल्नु र सुत्नुको मजा बेग्लै छ । काख न्यानो हुन्छ । काखमा सुत्दा सुरक्षित अनुभव हुन्छ । काखमा बस्दा हातखुट्टा सपक्क बेरिएको हुन्छ । यसरी सपक्क समातेर राखेपछि लड्छुजस्तो पनि लाग्दैन । चिसो पनि लाग्दैन । झन् काखमा राखेर यताउता डुलाउँदा त बेग्लै आनन्द आउँछ । यसो हुँदा निन्द्रापनि मिठो लाग्छ । झोलुङ्गोमा हल्लिदा चाहिँ शुरुशुरुमा रमाइलो भन्दापनि डर बढी लाग्छ । रिङ्गटा लागेजस्तो हुन्छ । डरैडर मानेर हल्लिँदा हल्लिँदा त्यै रिङ्गटाले निन्द्रा लगाउँछ । त्यसरी निदाउँदा आनन्द आउँदैन ।
हल्लिएपछि मात्र निन्द्रा लाग्ने बनाईदिएपछि ओछ्यानमा चुप लागेर निन्द्रा कुरेर बस्नपनि रमाइलो लाग्दैन । ओछ्यानमा पनि लडिएला कि, खसिएला कि ? जस्तो हुन्छ । डसना गिलो हुन्छ । त्यही गिलो डसनाभित्रै खसिएला कि जस्तो हुन्छ । एक्लो महसुसपनि हुन्छ । अनि कहाँबाट निन्द्रा आओस् ? ओछ्यानमा झुल हालिदिएपछि त झन् एक्लै थुनिएजस्तो र निस्सासिएजस्तो हुन्छ । यतिधेरै डर भएपछि निन्द्रा छिटै लाग्दैन । तर काखको कुरै बेग्लै । रिंगटापनि लाग्दैन । लडिएला, खसिएला जस्तोपनि लाग्दैन । हातखुट्टा फुक्काफाल भएर उडिएला कि जस्तोपनि लाग्दैन । बाआमाको ढुकढुकी सुनिन्छ । फेरिरहेको सासपनि सुनिन्छ । सपक्क समातेर राखेका हुन्छन् । अलिअलि हल्लाउछन् पनि । सुत बाबु सुत भन्दै बोलाउछन् पनि । यता र उता डुलाउछन् । यति भएपछि न एक्लो महसुस हुन्छ । न त खसिएला जस्तो महसुस हुन्छ । न त चिसो लाग्छ । आनन्दै आनन्दमात्र हुन्छ ।
हामी बच्चाका लागि काखभन्दा आरामदायी, मायालु र सुरक्षित ठाउँ अर्को छैन । आफैं काखमा लिने, खेलाउने, सुताउने, रमाउने । अनि काखमा धेरै रमाउने बच्चालाई काखे भयो काखे भयो भनेर गुनासो गर्न पाईयो र ? जतिखेर पनि काखमा बोकिराख्दा दुख्ख हुन्छ । त्यो हामीलाई थाहा छ । तर अहिले त हाम्रो सजिलो हेर्न परेन र भन्या ? हजुरहरुले आफ्नो सजिलोमात्र हेरेर भयो र ? ननिदाईन्जेल काखमा खेलाउनु, निदाएपछि अलक्क ओछ्यानमा राखिदिनु न । निदाइसकेपछि बिउझिँदा ओछ्यानमा वा झोलुङ्गोमा आफूलाई भेट्दा हामीलाई डर लाग्छ । अनि हामी रुन्छम । त्यो त डराएर रोएको हो नी । दुख दिन रोएको हैन नी । फेरि काखमा लिइदिनुस् । खेलाउनुस् । ढ्याप ढ्याप पार्दै यता र उता घुमाउनुस् । हामी खुशी हुँदै खेल्छम । खान्छम, दिसापिसाब गर्छम । सफा गरिदिनुस् । फेरि काखमा खेलाउँदै सुताउनुस् ।
बाआमाको काखमा रमाएर खेल्ने, सुत्ने हामी बच्चाहरुलाई काखे भयो काखे भयो काखे भयो भनेर गुनासो गर्न नपाई है । काखमा बच्चा खेलाउन, सुताउन पाउँदा रमाइलो मान्नपर्यो नी । हजुरहरुलाई पनि काखमा बच्चा लिँदा बेग्लै आनन्द आउँछ होला । झन् बढी माया लाग्छ होला । बच्चा आफूसंगै भएको महसुस हुन्छ होला । हैन र बाआमा, काकाकाकी र हजुरबा हजुरआमा ?
मेरो काखे कहानी सकियो । अर्को दिन अरु नै कहानी सुनाउँछु है ।
(२०७९ साल बैशाख ५ गते आईतबार)
Posted bymilanbagale June 19, 2022 June 19, 2022 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सम्यक सम्वाद भाग ६ — काखे बच्चा नभन्नु न मलाई !
सम्यकको मनोवाद भाग ५– डाइपर जिन्दगीको कहानी
आज म डाइपर जिन्दगीको सानो कथा सुनाउछु है ।
डाइपर मेरो जिन्दगीको पहिलो कपडा हो भनेपनि हुन्छ । सालनालले बेरिएको मलाई पुछपाछ पारेपछि सबैभन्दा पहिले डाइपर लगाईयो अनि बल्ल बेरबारे कपडा (र्यापर) ले शरिर बेरियो । कागजले बनेजस्तो देखिने यो कट्टु मलाई बडो अचम्मको लाग्यो । भेट्न आउनेले ‘बालखालाई जतिखेर पनि डाइपर लगाइदिन हुन्न’ भन्नुहुन्छ । कसैले चाहिँ ‘ कपडाको टालो लगाईदियो भने बच्चालाई चिसो हुन्छ, डसना, झोलुङ्गो सबैथोक फोहोर हुन्छ, बर्षायाममा सुक्नपनि गाह्रो हुन्छ त्यसैले डाइपर नै ठिक’ भन्नुहुन्छ । कपडाको टालो लगाईदिंदा दिसापिसाबले मपनि भिज्ने, झोलुङ्गोपनि भिज्ने, कपडापनि भिज्ने र पटक्कै घाम नलाग्ने भएपछि अधिकांश समय डाइपर लगाइरहनु मेरो बाध्यता बनेको छ । त्यसो त जतिखेर पनि डाइपर लगाईदिएका छैनन् । युरिन म्याटमाथि डाइपर नलगाई बेरबार पारेर पनि मलाई राख्ने गरिएको छ ।
भोटो र डाइपर नलगाई बेरबारमात्र पारेर राखिदिंदा मलाई आनन्द लाग्छ । धेरैथोकले बेरेको, कसेको, छोपेको मलाई मन पर्दैन । जतिखेर पनि टोपी लगाईदिएको पनि मन पर्दैन । भोटो, दौरा र डाइपर फाल्न नसकेपनि टोपी त म सजिलै मिल्काईदिन सक्छु । गर्मी भयोभने टोपी फालिदिन्छु । बेरबार पार्ने कपडाले पनि कहिलेकाही बिझाउँछ । गर्मी गराउँछ । त्यस्तो बेलामा बेरबारे कपडापनि फालिदिन्छु । तर डाइपर त मैले कसरी फाल्न सक्छु र ? डाइपरले दुख दिएको बेलामा कराउने आवाज अलि भिन्नै हुन्छ रे । कुरो बुझिन्छ रे ।
शुरुशुरुमा मलाईपनि डाइपर पटक्कै मन परेको थिएन । टपक्क परेको । हेर्दै एकदम उकुसमुकुस होलाजस्तो । कम्मर बेस्सरी दुखाउलाजस्तो । अनि दिसापिसाबको भारी बोकेर बसिराख्नुपर्ने । डाइपर खोलेर दिसापिसाब कतिखेर फालिदेलान् र हलुका भएर बस्न पाईएला जस्तो लाग्ने । टालोमा झैं यसमा दिसापिसाब चुहिन्न । आफू दिसा पिसाबले ढाडिएर बस्नु परेको छ । बाहिर देख्नेले केही नदेख्ने । बोक्नेलाई आनन्द हुने । ब्यहोर्नेलाई हैरान हुने । डाइपरपनि थरिथरिका हुँदा रैछन् । कुनैचाहि कट्टुझैं लगाउने खालका । लगाउँदा जसोतसो लगाएपनि फुकाल्दाचाहि च्यात्नुपर्ने । अर्कोचाहि खुला खालको हुँदो रहेछ । दुइतिर टेपजस्तो चीज राखिएको हुँदो रहेछ । लगाउँदा त्यसलाई लगाईदिए भो । फुकाल्नपनि त्यही टेप खोलिदिए भयो । आजकाल त डाइपर लगाउने बानी परिसक्यो ।
डाइपरभित्र दिसापिसाबले ढाडिएको बच्चाको कल्पना गर्दैमा अत्यास लाग्छ भनेको सुन्छु बाले । गतिलो खालको डाइपर पर्यो भने यो बडो आरामदायी हुन्छ । पिसाब सपक्क सोस्छ । चिसो लागेको महसुस हुन्न । दिसापनि खासै लत्पतिन्न । तर गतिलो डाइपर परेन भनेचाहिँ हामीलाई एलर्जी हुन्छ । बेस्सरी चिलाउँछ । अत्यास लाग्छ । चिच्याउन मन लाग्छ । धेरैबेर लगाएर राखिदिंदा रातो बिमिरा आउँछ । मेरो ख्याल गर्नु है ।
जतिखेर पनि डाइपर लगाईरहँदा मलाई अत्यास लाग्छ । डाइपर खोलिदिएर पातलो कपडाले बेरेर राखिदिंदा ज्यान चंगा भएको महसुस हुन्छ । हामी बच्चाहरुलाई रातदिन डाइपर लगाएर नराखिदिनुस् है । कति गुम्सनु त्यो डाइपरभित्र ? बेलाबेलामा हलुका टालोले बेरेर राखिदिनुस् है । टालोलाई डाइपर सम्झेर चौबीसै घण्टा बेरिराख्नुभो भनेचाहिँ डाइपर जिन्दगीभन्दा झन् बढी दुख पाईन्छ । टालो पिसाबले भिजिहाल्छ । दिसापनि लागिहाल्छ । अनि त झन् दुख पाईन्छ ।
डाइपर लगाएर पनि सुख छैन । नलगाएर पनि सुख छैन । दिनमा कतिवटा फेर्नु ? किन्नपनि हैरान । फेर्नपनि हैरान । फाल्नपनि हैरान । डाइपर लगाइदिएको छु भन्दै फेर्दै नफेरी हामीलाई दिनभर गुम्स्याएर चाहि नराख्नु है । कहिले टालोले बेरिदिनु । कहिले डाइपर लगाइदिनु । कहिले केहीपनि नलगाई कपडाले बेरेर न्यानो पारेर राखिदिनु । त्यसो गरे हामी बच्चालाई नी आनन्द । हजुरहरुलाई नी आनन्द । छिटोछिटो बढ्नलाई खाएको खायै गर्न परिहाल्यो । खाएपछि दिसापिसाब त गर्न परिहाल्यो । अनि डाइपर र टालोको जोहो त गरिरहनै पर्यो । कसो बा आमा, काकाकाकी र हजुरबा हजुरआमा ?
(२०७९ साल असार २ गते बिहिबार)
Posted bymilanbagale June 17, 2022 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सम्यकको मनोवाद भाग ५– डाइपर जिन्दगीको कहानी
सम्यकको मनोवाद भाग ४– पहिलो नुवाईधुवाई र फिँजले लिएको सातो
म जन्मेको १ महिना हुनलाग्दा समेत मेरो नुवाईधुवाई हुनै सकेको थिएन । त्यो मेसो आज बल्ल जुर्यो । जन्मनासाथ मलाई पुछपाछ पारेर अस्पतालको निओनेट वार्डमा राखे । दिनदिनै पुछपाछ गरिरहे । ९ दिनको दिनमा म अस्पतालबाट घरमा आएँ । नरिवेलको तेल लगाईदिएपछि मलाई ‘बास्ना आउने छोरो’ भन्न थाले । यसो हेर्दा म एकदम सफा देखिएँ । घामै ताप्न नपाएको बच्चालाई चिसो लाग्ला कि भनेर न्वाईध्वाई गराउनतिर लागेनन् । आमाले मनतातो पानीमा रुमाल भिजाएर बेलाबेलामा पुछपाछ गरिरहनुभयो । पुछपाछ पारेपछि म चिटिक्क देखिन्थें । त्यति भएपछि त न्वाईध्वाईको कुरै हराएजस्तो भयो । मुख्य त दिनभर घामै नलाग्ने भएपछि चिसो लाग्ला भन्ने डरले न्वाईध्वाईको हतारो देखिएन ।
पछिल्लो समय मलाई अलि चटपटी हुन थालेको थियो । जीउमा घमौरापनि आउन थालेको थियो । मेरो कान चिलाउन थालेको आमालाई मेसो भएछ । कानमा घाउ आउन लागेको थाहा पाउनासाथ आमाले औषधी मगाएर कान सफा गरिदिनुभयो । अनि सानीमासंग ‘बच्चालाई आज न्वाईदिन पर्यो’ भन्नुभएछ । यति सल्लाह भएपछि आमा र सानीमा मिलेर मेरो न्वाईधुवाईको तयारी गर्नुभयो । खासमा आउने शनिवार नुवाईदिने विचार थियो रे आमाको । कानमा घाउ आएपछि त नुहाईदिईहाल्नुपर्छ भन्ने भएछ । अनि मेरो नुवाईधुवाईमा बा छुट्नुभो ।
दिउँसोतिर बुबु खाएपछि मेरो पहिलो नुवाई शुरु भयो । आमा र सानीमाले बाटा र बाल्टिनमा मनतातो पानी जम्मा गर्नुभएको थियो । आमाले काखमा राखेर आफ्नो हातले पानी हाल्दै पुछेझैं गरि नुवाईदिन थाल्नुभो । शुरुमा जीउमा मनतातो पानीले स्पर्श गर्दा त मलाई रमाईलो लाग्यो । टाउकोमा त पुछेझैं गरेर मात्र भएन । अलिकति पानी हाल्नै पर्यो । त्यसपछि त म आत्तिएँ । अलिअलि पुछेझैं गरेर जीउ भिजाएपछि फिँज दल्न शुरु भयो ।
फिँज दलेपछि त मेरो सातै गयो । के भएको यस्तो ? जीउभरी सेतो फिँजै फिँज । मनतातो पानी हाल्दै आमा र सानीमाले बिस्तारै मिचेका छन् । जति मिच्दै गयो, उति फिँज बढ्दै जाने रहेछ । म त एकछिन फिजैफिजले पुरिएँ । फिँजले पुरिएपछि त लड्छुजस्तो, चिप्लन्छुजस्तो भयो । दुखेको हो कि ? पोलेको हो कि ? के हो के हो मेलोमेसै नपाएपछि म बेस्सरी रुन थालें । धेरै नै रुन थालेपछि आमा र सानीमालाई अप्ठेरो पर्यो । मलाई सम्हाल्ने कि मैलो बिस्तारै मिच्ने कि पानी हालेर पखाल्ने ? म त चिप्लेर हैरान भैसकेको थिएँ । उहाँहरु पनि मलाई सम्हाल्न नसकेर हत्तु हुनुभो । मेरो आँखामा फिज नपरोस् भनेर निकै ख्याल गर्दै फिँज दल्नुभएको थियो आमा र सानीमाले । कानमा पानी नपरोस् भनेर कपासपनि लगाईदिनुभएको थियो ।
म रुन थालेपछि मेरो नुवाईधुवाईको गति ह्वात्तै बढ्यो । ‘नरोउ बाबु नरोउ’ भन्दै छिटोछिटो पखालपुखुल गर्न थाल्नुभो । बिस्तारै पखालेर जसोतसो फिज गएपछि मेरो रुवाई बन्द भयो । आमाले मलाई नयाँ लुगा लगाइदिएर बेरबार पारेर हिटर छेउमा लगेर राखिदिनुभयो । लुगा फेरेपछि चाहि मलाई बेग्लै आनन्द आयो । जीउ हल्का भएको महसुस भयो । चिलाएको, जीउ चटपट भएजस्तो सबै सबै ठिक भयो । टाउकोपनि असाध्यै हल्का भयो । नुहाएपछि त कति मिठो निन्द्रा पर्दो रहेछ । निकैबेर लुटुक्क निदाएँ । सेतो फिजजस्तो त्यो के दलिदिएका हुन्, त्योचाहि मन परेन । म बेस्सरी रुन थालेपछि आमा र सानीमाले धेरै फोटो खिच्ने मेसोपनि पाउनुभएन ।
टाउकोमा झोलजस्तो फिँज र जीउमा डल्लाजस्तो चीज दलेपछि फिँज बेस्सरी फिँजिने रहेछ । यी दुइथरी चीज के होलान् ? किन दुइथोक दलेका होलान् । नुवाईदिंदा बेवी साबुन, बेवी श्याम्पु भनेको सुनेको थिएँ । फिँज आउने चीजको नाम त्यही रहेछ कि ? मलाई असाध्यै डर लाग्यो त्यो फिँजसंग । मनतातो पानी र प्लाष्टिकको बाटासंग त डर लागेन । मलाई नुहाइदिंदा बापनि संगै हुनुभएको भए कति रमाइलो हुने थियो । मैले पहिलोपटक नुहाएको बाले हेर्नै पाउनुभएन । ठिक छ बा । अर्कोपटक चाहिँ शनिवार पार्न भन्नु ल ।
Posted bymilanbagale June 16, 2022 June 16, 2022 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सम्यकको मनोवाद भाग ४– पहिलो नुवाईधुवाई र फिँजले लिएको सातो
सम्यकको मनोवाद भाग ३ – मिलिकमिलिक र गड्याङगुडुङ नगर्नु न आकाश !
केही दिनअघि हराएको मेरो निन्द्रा फेरि फर्किएको छ । म लुटुक्क निदाउन थालेपछि बाआमालाई अलिकति भएपनि राहत भएको छ । आजकाल हरेक साँझ झमझम पानी पर्छ । पानी परेको आवाजसंगै म निदाउँछु तर मिलिक मिलिक हुन थालेसंगै अलिकति तर्सन्छु पनि । राती भएपछि आकाश बेस्सरी कराउँछ । गड्याङगुडुङ गर्छ । बेलाबेलामा मिलिक मिलिक मिल्किन्छ । चड्काने पर्लाजस्तो हुन्छ । यी सबै कुरा त म बुझ्दिन । मलाई न आकाश थाहा छ न त पाताल नै । मलाई आमाको काखमात्रै थाहा छ ।
पानीमात्र परेको बेलामा त बाआमा आत्तिनुहुन्न । शीतल हुनेभो, बच्चालाई संगीत सुनेजस्तै हुनेभो आननदले निदाउने भो भन्नुहुन्छ तर मिलिक मिलिक गर्न थालेपछि बाआमा बेस्सरी आत्तिएको देख्छु । हत्तपत्त झ्यालढोका लगाउँनुहुन्छ । बत्ती निभाउँनुहुन्छ । पर्दा लगाउँनुहुन्छ । बा मेरो कान छोप्न खोज्नुहुन्छ, आमा कुनातिर राखेर बाक्लो लुगाले छोपेर राख्नुहुन्छ । “चड्काने पर्यो भने त बालखा बेस्सरी तर्सिन्छ । तर्सिएर विरामी पर्ने हो कि ? कहाँ लगेर लुकाउने हो खै छोरोलाई ?” यस्तैयस्तै कुराले पीर मानेजस्तो लाग्छ ।
अहिलेसम्म आकाश चड्किएको त मैले सुनेको छैन तर यो खतरनाक कुरो रैछ जस्तो लागेको छ । खुरुखुरु हल्काहल्का पानी पर्नु तर धेरै गड्याङगुडुङ र मिलिकमिलिक नगर्नु न है आकाश । बच्चा तर्साउने काम किन गर्नु ? नचाहिँदो काम नगर्नु न है आकाश । अलि ठूलो भएपछि म यो आकाश भन्या के रैछ, गड्याङगुडुङ र मिलिकमिलिक गर्ने कुरो के रैछ, राम्ररी हेर्नेछु । अहिले त म यस्तो कुरो केही बुझ्दिन ।
मेरो अरु नयाँ खबर त केही छैन दादादिदी, बाआमा र अकंल आन्टी । आक्कलझुक्कल घाम तापेकै छु । अलिअलि तेल लगाएकै छु । वडा स्वास्थ्य कार्यालयमा लगेर मेरो तौल लिने कुरो सुनेको छु । निदाएपछि बेलाबेलामा म निकै मिठो हाँस्छु अरे । त्यो हाँसो खिच्नलाई म ननिदाएकै बेलामा पनि बाआमा मोवाइल बोकेर मौका पर्खिरहेको देख्छु । मेरो कस्तोकस्तो हाँसो खिचिएछ, ठूलो भएपछि हेर्नेछु । मेरो नजिक मोवाइल धेरै नल्याउनु है । खस्यो भने मलाई लाग्छ नी । लाग्यो भने त मलाई दुख्छ । यति कुरा त बुझेकै होलान् नी । बरु मेरा फोटा धुलाएर एल्बम बनाएर राखिदिनु है । मोवाइलको फोटो त आज छ भोली छैन । मोवाइल हरायो वा बिग्रियो भने मेरो बालापनको फोटो खोज्न कता जानु ?
अब अलि दिनमा मैले खोप लगाउन पर्छ अरे । के खोप हो, मैले थाहा पाएको छैन । थाहा पाएपछि भनम्ला । आजलाई यत्ति नै ।
(२०७९ साल असार १ गते बुधबार)
Posted bymilanbagale June 14, 2022 June 15, 2022 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सम्यकको मनोवाद भाग ३ – मिलिकमिलिक र गड्याङगुडुङ नगर्नु न आकाश !
सम्यकको मनोवाद भाग २— घामविनाको बालापन र निन्द्राविनाको झोलुङ्गो
म जन्मेको २५ दिन भैसकेछ। यो विचमा मेरो गाला र हातखुट्टा हरू पुक्कपुक्क भैसकेको छ। म निकै पोटिलो र रसिलो देखिएको छु रे। मेरो तौलपनि राम्रैसंग बढेको छ रे। भेट्न आउनेहरूले गफ गरेको सुन्छु। हस्पिटलमा बस्दा आफैंले चुसेर आमाको बुबु खान नपाएर हो कि किन हो, घर आएपछि म त आमाको बुबु खाएको खायै गर्ने भएको छु । निदाउँदै खाने र खाँदाखाँदै निदाउने भएको छु। निदाएको त के भन्नू खै ? ५ मिनेटमै बिउँझन्छु। त्यस्तोलाई के निदाएको भन्ने ? झकाएको भन्छन् क्यार हैन बा ?
हस्पिटलबाट घर आएको एक हप्ता म खुब निदाएँ। आजकाल त मेरो निन्द्रा कुटुने बुढीले चोरेजस्तो छ। मेरो निन्द्रा किन यस्तरी मबाट भागेको ? बेस्सरी खानुपर्ने, खाएपछि हुलुक्क गरेर फेरि खानुपर्ने। हिजोआज झोलुङ्गो पनि रमाईलो लाग्न छोडेको छ। निन्द्रा हराईपछि त झोलुङ्गोको बसाइँ दिक्कलाग्दो हुने रैछ । पछिपछि रमाइलो लाग्ला कि ?
फोटो खिच्ने कला र सजावट— सम्यककी सानीमा रेजिना बच्काई
अस्तिबाट मैले तोरीको तेलपनि लगाएँ। मेथी पड्काएको तोरीको तेल। यो तेलको गन्ध अलि कडा हुने रैछ। तरपनि लगाईसकेपछि जीउ अलि न्यानो महसुस भयो। तर नरिवेलकै तेल मिठो र हलुका।
२ दिनअघि मैले घामपनि ताप्न पाएँ। आधा घन्टाजति घाम ताप्दा मजा आयो। धेरै बेरचाहिँ ताप्न सकिन। दिनदिनै बिहानको कलिलो घाम ताप्न पाए पो । बिहानभरि बादल र कुहिरो लाग्ने रैछ। कहिले पानी पर्ने। आक्कलझुक्कल लाग्ने दिउँसोको त्यो छिप्पेको घाम कतिबेर ताप्न सक्नु ? त्योपनि जम्मा एकदिन ताप्न पाएको न हो ।
अब असार आउन लाग्यो। यो बर्खाभर त घाम ताप्न के पाईएला र खै ? बुबु खानासाथ मैले हुलुक्क गर्न थालेकोले मलाई पहिलेभन्दा बढी न्यानो गरेर राखेको छन्। हिटर बालेर कोठा न्यानो पारिरहन्छन्। तैपनि घाम भनेको घाम हो । बेलाबेलामा ताप्न कसो नपाईएला ? मेरो सेकतापमा कोइलाचाहिँ बालेका छैनन् । कोइला मन नपराउने रैछन् कि ? वरिपरि नपाईने रैछ कि ? कोइलाभन्दा हिटरकै तातो ठिक मानेका हुन् कि ?
घाम राम्ररी नलागेकोले मेरो नाना सुक्नपनि समय धेरै लागिरहेको छ। केही नानाहरू खस्रो खालको परेछन्। मलाई खस्रो नाना पटक्कै मन परेन। बच्चाको नाना खस्रो बनाउन हुन्न नी अंकल आन्टी र दादा दिदीहरु । ग्याटिस भको सुरूवालपनि मन परेन। जम्प सुट कि के नाम हो, तलमाथीको एउटै लुगा खुकुलो र नरम हुँदो रहेछ। त्योचाहिँ मन पर्यो। तर त्यो लुगा कत्रो ठूल्ठूलो हो ? मलाई ठिक्क हुने नपाईएको हो कि जस्तो भेट्यो त्यस्तै लगाईदिएका ?
लौ त। मेरो डायरी आजलाई सकियो है दादा दिदी, बा आमा र अंकल आन्टीहरू।
(२०७८ साल जेठ २८ गते शनिवार)
Posted bymilanbagale June 12, 2022 June 12, 2022 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सम्यकको मनोवाद भाग २— घामविनाको बालापन र निन्द्राविनाको झोलुङ्गो
सम्यक शर्मा बगालेको मनोवाद
मेरो नाम सम्यक शर्मा बगाले हो । आज म २१ दिनको भएँ। म त टन्न बुबु खान्छु, दिनभर सुत्छु, रातभर छुकछुक गर्छु। खाएर फुर्सद भयो कि म त भोक लाग्यो भनेर कराउन थालिहाल्छु। म कराएको बाआमाले बुझ्दैनन् अनि ‘लौ बालखा त रोयो’ भन्छन्। कहाँ रोएको हो र म ? म त खान द्याओ भनेर कराएको पो हो । म त दिनभर रातभर जतिखेर पनि बुबु खाएको खायै गर्छु। छिनछिनमा खान्छु। खुवाएर डाईपर फेरेपछि आमाले मलाई चट्ट पारेर प्याकिङ गरेर झोलुङ्गामा सुताउनुहुन्छ । बाले बिस्तारै झोलुङ्गो हल्लाउछन्। ‘ए मेरो सानू साथी’ भन्दै झोलुङ्गो हल्लाएको सुन्दा मलाई रमाइलो लाग्छ। कहिलेकाही त म डाइपर फेरेको १ सेकेन्डमै फोहोर पारिदिन्छु। त्यहीबेला चाहिँ मेरा बाआमाको अनुहार हेर्न लायकको हुन्छ। मलाई त मजा लाग्छ। दिक्क मानेझैं खिस्स हाँस्छन् बा ।
शुरूशुरूमा झोलुङ्गो हल्लिदा मलाई अलिअलि डर लाग्यो। बानी परेपछि त झोलुङ्गोमा सुत्न मजा हुने रहेछ। झोलुङ्गोमै मात्र बसिरहन पाए हुन्थ्यो जस्तो त लाग्दैन । बोकेर यता र उता डुलाउँदा पनि मलाई रमाइलो लाग्छ । खाटमा सुत्नचाहि अलि झ्याउ लाग्छ । मेरी आमाले मेरो लागी चिटिक्कको सिरक, डस्का, तकिया बनाइदिनुभएको छ । खाटमा सुताउँदा पनि म मेरै डसनमा सुत्छुु । मेरा लागि अनेकथोक जोहो गरेका रहेछन् । बाको त के ढंग हुन्थ्यो र ? सबै आमाकै आइडिया होला । बाले ‘हुन्छ हुन्छ रन्जु ल ल’ भने होलान् ।
म जन्मेदेखि पानी परेको पर्यै छ। मेरो कलिलो जीउले मजाले घाम ताप्न पाएको खै ? आज घाम लाग्ला भन्यो, छैन । भोली लाग्ला भन्यो, छैन । घामै देख्न पाईएन ए । घाम ताप्न नपाएपनि हिटर मन्दमन्द बालेर सेक्नचाहिँ सेक्छन्। बाआमालाई नरिवेलको तेल मन पर्दो रैछ कि क्याहो, मलाई नरिवलको तेलमात्र लगाईदिएका छन्। नरिवेलको तेलको बास्ना मन परेर होला, बा मलाई ‘ए बास्ना आउने छोरो’ भनिरहन्छन्। कहिलेकाही त तोरीको तेलपनि घसिदिए हुने हो। तर तोरीको तेलको बास्ना नरिवेलको जस्तो त के होला र ?
नर्सको छोरो हुन रमाइलो रैछ। चट्ट स्याहार पाइने। जतिखेर पनि राम्रो हुन पाइने। दुखविमार केही भए थाहा पाईहाल्ने । गाह्रोसाह्रो पर्नासाथ मेरी आमाले नजानेको केही छैन। अहिले त आमाको फूलटाइम डिउटी भन्नू नै मेरो स्याहार हो। पछि बाको जिम्ममा छोडेर हस्पिटल डिउटीमा जान थाल्नुभो भने यी बेढंगी बाले मेरो के हालत बनाउलान् खै ?
मेरा बाको मलाई स्याहार्ने ढंग खासै गतिलो छैन। न राम्ररी डाईपर लगाईदिन जान्दछन् न त मुन्टो नबांगिने गरि हात तलमाथि राखेर सपक्क बोक्न जान्दछन् न त र्यापरले सपक्क बेरेर राख्न जान्दछन्। डाइपर फेर्नुअघि युरिन म्याटमा सुताउन बिर्सन्छन् र आमाको गाली खान्छन् । र्याम्परले सपक्क पारेर बेर्न पनि जान्दछन् ।
मलाई स्याहार्न ढंग नजानेपनि अल्छीचाहिँ पटक्कै गर्दैनन्। आमालाई ‘छोरो स्याहार्न सिकाईदेउ ए न रन्जु’ भनिरहन्छन्। शनिवार र आईतबार दिनभर मसंगै बस्छन्। लुगाचाहिँ राम्ररी धोईदिन्छन्। रातभर मेरो डिउटी गर्छन्। बसमा निदाउँदै अफिस जान्छन्, फर्कदा पनि निदाउँदै फर्कन्छन् रे। यस्तै गफ गर्या सुनेथें। मेरो डिउटी गर्न थालेपछि बाले किताबसिताब पढ्न छोडिदिए । डायरी लेख्न पनि जाँगर चलाउन छोडे। मुस्किलले २(४ हरफ लेख्छन् । बच्चाबच्चीको डिउटी गर्न परेपछि केको डायरीसायरी ? हामीलाई समय दिन पर्यो नी। लौ त। आजलाई यति नै। म त सुतें है। मलाई झुपुक्क निन्द्रा लाछ । एकैछिनमा उठेर बुबु खाईहाल्ने हो म त।
(२०७९ साल जेठ २४ गते बुधबार)
Posted bymilanbagale June 8, 2022 June 8, 2022 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सम्यक शर्मा बगालेको मनोवाद
Posted bymilanbagale March 26, 2022 Posted inUncategorizedLeaveacomment on अवरोधको शहर,अवरोधको कहर